Uyibhalisa njani i-Binance ngeKhowudi yokuDluliselwa kweBinance RFMD5RRN Ukufumana 35% Izaphulelo kwiiNtlawulo zoRhwebo » Crypto Asset Home
Uyibhalisa njani i-Binance ngeKhowudi yokuDluliselwa kweBinance RFMD5RRN Ukufumana 35% Izaphulelo kwiiNtlawulo zoRhwebo
Ungayibhalisa njani iBinance?
Inyathelo 1: Ndwendwela iBinance kwaye ukhethe iRejista kwindawo ephezulu ekunene
Inyathelo 2: Khetha i-ID yokuThumela ukugcwalisa i-ID yokuBhekiswa kweBinance okanye iKhowudi yokuDluliselwa kweBinance Inkcazo: RFMD5RRN
Inyathelo 3: Gcwalisa idilesi yemeyile yakho, inombolo yokuvula, khetha ndiyifundile Imigaqo yeNkonzo, kwaye ucofe Yenza iAkhawunti.
Inyathelo 4: Yiya kwiDashboard yeAkhawunti ukuze usebenzise i-BNB ukuhlawulela iifizi (25% Isaphulelo)
Inyathelo 5: Yiya kuThumelo lweAkhawunti ukujonga 10% ikhomishini yokuqalisa kwakhona / yesaphulelo kwimbali
Yintoni i-ID yokuBhekiswa kweBinance? Yintoni iKhowudi yokuDluliselwa kweBinance?
Imifanekiso Ebonisa inyathelo ngenyathelo lesikhokelo kwindlela yokuBhalisa iKhowudi yokuDluliselwa kweBinance Inkcazo: RFMD5RRN
TEli nqaku libonisa inyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokubhalisa i-Binance nge-ID ye-Binance Referral ID okanye iKhowudi yokuDluliselwa Inkcazo: RFMD5RRN.
Ndwendwela iBinance nge-ID yokuBhekiswa kweBinance: Inkcazo: RFMD5RRN
Usebenzisa isikhangeli sakho sewebhu, ndwendwela iBinance kwaye ukhethe ukubhalisa kwi-bar ephezulu ngasekunene okanye ucofe eli khonkco https://www.binance.com/en/register?ref=RFMD5RRN
Kwiphepha lokubhalisa iakhawunti, khetha i-ID yokuBhekisa kwaye ugcwalise i-ID yokuhanjiswa kweBinance: Inkcazo: RFMD5RRN. Uya kuyibona ikhomishini yakho yokubuyisela kwinqanaba 10%. Esi saphulelo kwimirhumo yokuthengisa siyasebenza ebomini.
Emva koko, gcwalisa idilesi ye-imeyile, inombolo yokuvula, kwaye ukhethe ukuba ndiyifundile iMigaqo yeNkonzo. Cofa kwi-Akhawunti. Uya kufumana ikhowudi ye-akhawunti yokuvula kwi-imeyile yakho nasemva kokungqinisisa ngokusebenzisa ikhowudi yokuvula iakhawunti, iakhawunti yakho ilungile.
Ngena kwiakhawunti yakho kwaye uye ngasekunene ukukhetha iAkhawunti kwaye ukhethe iDashboard. Skrolela ezantsi kweDashboard kwaye wenze ukuba isebenzise i-BNB ukuhlawulela iifizi ukuze ufumane ukongeza 25% isaphulelo kumrhumo wokurhweba ubomi bonke. Uya kuthenga kwaye ugcine i-BNB kwiakhawunti yakho ukonwabela 25% isaphulelo xa usebenzisa i-BNB ukuhlawula iifizi zakho zokurhweba.
Yiya ngasekunene ukhethe iAkhawunti kwakhona uze ukhethe ukuThumela. Skrolela ezantsi okanye ukhethe umrhumo weKhomishini ekwabelwana ngawo nawe ukujonga irekhodi lembali 10% imirhumo yokubuyisa / yokubuyisa. Uya kusebenzisa i-ID yokuhanjiswa kweBinance: Inkcazo: RFMD5RRN ngexesha lokubhaliswa kweakhawunti ye-Binance ukuze ukonwabele 10% Imali ebuyiswayo / isaphulelo. Ngokusebenzisa i-BNB ukuhlawulela iifizi ezenziweyo, unexabiso lilonke 35% isaphulelo kwiirhafu zokurhweba.
I-ID yokuhanjiswa kweBinance Inkcazo: RFMD5RRN
Ikhowudi yokuDluliselwa kweBinance Inkcazo: RFMD5RRN
Ngokusebenzisa le ID yokuhanjiswa kweBinance / iKhowudi ngexesha lobhaliso lweakhawunti yeBinance, uya konwaba 10% Iirhafu zokurhweba isaphulelo / ukubuyisa / ukubuyela ebomini. Sebenzisa i-BNB ukuhlawulela iifizi zokurhweba ukonwabela ukongezwa 25% isaphulelo kwiirhafu zokurhweba. Iyonke ikhona 35% isaphulelo kwiirhafu zokurhweba.
I-BNB yingqekembe ye-cryptocurrency okanye ithokheni eyenziwe ngu-Binance ukunika amandla inkqubo ye-Binance ecosystem. I-BNB yenye yezona zixhobo zidala kakhulu kwihlabathi. Ungasebenzisa i-BNB ukuhlawula iifizi zokurhweba kwi-Binance ukonwabela 25% isaphulelo kwimirhumo. Zininzi nezinye iimeko zokusebenzisa kunye nokusetyenziswa kwe-BNB, kubandakanya nentlawulo, uhambo, ukuzonwabisa, iinkonzo kunye nezemali. Ngokwe-Binance CEO u-Changpeng Zhao okanye owaziwa njenge-CZ Binance, I-BNB yiYakha, Thenga, Tshisa #BNB
I-Binance yenye yeendawo eziphezulu zokutshintshiselana nge-imali yedatha kwiBitcoin kunye neAltcoins ezinelona nani liphezulu lezorhwebo. I-Binance yaziwa kakuhle ngeeNgxowa-mali zayo yiSAFU. I-SAFU imele iNgxowa-mali yeeMpahla eziKhuselekileyo yaBasebenzisi (SAFU), eyenziwe nguBinance njengengxowa-mali yeinshurensi engxamisekileyo ukukhusela umdla wabo bonke abasebenzisi.
Uyibhalisa njani iKhowudi ye ID yokuDluliselwa kweBinance RFMD5RRN